C/risaaq Nuux Maxamed oo jaamacadd ka qalin jabiyay isagoo 70 sanno jir ah (dhegayso) – Radio Daljir
Siteenbar 30, 2017 11:44 b 0
Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland C/risaaq Nuux Maxamed Ciise (Hantiile) waxaa uu kamid ahaa dufcadii u dambeysay ee ka qalin jabiyay kulliyadda Culuumta Siyaasadda ee jaamacadda Bariga Afrika, ee magaalada Garowe.
Arday badan ayaa qalin jabisay, waxaase C/risaaq Nuux uu kaga duwan yahay wuxuu waxabarashada jaamacadda dhammeystay isagoo ilaa toddobaad tan jir ah oo ay fasal la fadhiday arday da’ yar oo qaar kood uu dhali karto halka qaarna uu ba awoowe u noqon karo.
C/risaaq Nuux Maxamed , oo aad ugu faraxay guusha uu gaaray ayaa aad ugu mahadceliyay macallimiinta iyo ardada Jaamacadda.
Magaalada Garoowe ayuu iigu warramay Cabdirisaaq Nuux Maxamed waxaa ugu horrayn aan weydiiyay sababta ay sharciga u baratay.
Raysal wasaare Khayre oo xariga ka jaray saldhiga wayn ee Turkiga